पीत पत्रकारिता, प्रीत पत्रकारिता ! - Dainik Nepal
विनोद ढकाल २०७६ जेठ २३ गते ९:२१
कोही पत्रकारले समाचार लेखेकै आधारमा कसैसँग मुनाफा लिने कोसिस गर्छ भने, त्यो त पीत पत्रकारिता पनि होइन । खास अर्थमा पत्रकारिता नै होइन । त्यो अपराध हो । अपराधलाई पीत पत्रकारिताका नाममा व्याख्या किन गर्ने ?
पीत पत्रकार कि पत्रकारिता ?
कुनै पनि विषयलाई भावनात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेर त्यसलाई विचार बनाउने कोसिस गरिन्छ, त्यो प्रयोग गरिन्छ भने त्यसलाई पीत पत्रकारिता भनिन्छ । यहाँ त पीत पत्रकारिताको व्याख्या नै गलत अर्थमा बुझाउने प्रयास भएको छ । कोही पत्रकारले समाचार लेखेकै आधारमा कसैसँग मुनाफा लिने कोसिस गर्छ भने, त्यो त पीत पत्रकारिता पनि होइन । खास अर्थमा पत्रकारिता नै होइन । त्यो अपराध हो । अपराधलाई पीत पत्रकारिताका नाममा व्याख्या किन गर्ने ? त्यसबेला भन्न सक्नुपर्छ– पत्रकारिता अँगालेको व्यक्ति जो पत्रकार हो, त्यो अपराधी भयो ।
मेयर चौधरीकै सन्दर्भलाई जोडौं । चौधरीले सबै अन्तरवार्तामा रामप्रसाद चौलागाँई र आफूलाई मन नपरेका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारी भनेका छन् । चौलागाई मेयरको टिकटका निम्ति चौधरीसँगका स्पर्धी थिए भने, केही कर्मचारी चौधरीप्रति वफादार बनिदिएनन् । उनले बारम्बार पीत पत्रकारिताको कुरा गरेका छन् । उनको हकमा आएका समाचार वा प्रश्नहरू पित छैनन् । उनलाई कुनै व्यक्ति जसले पत्रकारिता पेशा अँगालेको छ, मन परेन भने, समग्र पेशालाई गाली गर्ने, त्यो पनि कानुन उल्लंघन गर्दै ? उनले गरेको असंवैधानिक चरित्रलाई श्वेत देख्ने सामाजिक दृष्टि कुन दुरबिनबाट हेरिन्छ, त्यो पनि जान्न मन छ । यो अराजकतावादी विचार थियो, त्यसलाई मलजल गर्ने र सही माथि सही थाप्ने अराजकताको समर्थन गरेको होइन ? लोकतन्त्रमा यस्तो हुन्छ ?
अतः कुनै पनि धारणा बनाउनुअघि लोकतन्त्र, वैचारिक स्वतन्त्रताको समानान्तरमा पत्रकारितालाई राखेर विचार गर्नु राम्रो होला । अन्यथा, आम मान्छेले पत्रकारको नाममा आम मानिसलाई कालो मोसो दल्छु भन्नु नौलो कुरा हुनेछैन । पत्रकारिताको देन, यसले गरेको समर्पणको जगमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको मुलुकमा छु भन्नेहरूले पनि हेक्का राखून् । मैले त, डेढ दशको यो यात्रामा आक्रामक समूहले आरोप लगाउँदा, सुन्दै आएको हो पीत पत्रकारिता तर निडर, स्वतन्त्र र इमानमा रहेर गर्दै आएको प्रीत पनि पत्रकारिता नै हो ।